महन्थ ठाकुरकै नेताहरु असन्तुष्टी पोख्दै - Madhesh Pati
महन्थ ठाकुरकै नेताहरु असन्तुष्टी पोख्दै
जसपामा आन्तरिक सरसल्लाह नै गरि कार्यक्रम गरेकोप्रति नेताहरु रुष्ट हुँदै ।
२०७८ श्रावण २३, शनिबार २०:५२ बजे
बलिराम कापरी/ जनकपुरधाम, साउन २३ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले बिगत केहि दिन देखि सुरू गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रमबाट उनीनिकट नेताहरू नै असन्तुष्ट भएको छन् ।
जसपाभित्र कुनै सल्लाह र छलफल नै नगरी कार्यक्रम तय गरिएको भन्दै ठाकुरनिकट वृषेशचन्द्र लाल तथा डा. विजयकुमार सिंहलगायतका नेताहरू असन्तुष्ट भएका हुन् । असन्तुष्ट भएको कारण शुक्रबार सप्तरीको राजविराज र शनिबार जनकपुरमा आयोजना गरिएको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा लाल तथा डा. सिंह लगायत नेताहरू कार्यक्रममा सहभागी भएनन् । गृहनगर जनकपुरमा रहे पनि दुबै नेताले कार्यक्रममा सहभागिता जनाएनन्।
अहिले भइरहेका कार्यक्रमबारे आफ्नो फरक मत रहेको बताउँदै लालले कार्यक्रम तय गर्नुपूर्व पार्टीभित्र बहस र छलफल हुनुपर्नेमा त्यस्तो नभएको बताएका हुन् । मधेश र मधेशी जनताले छुट्टै राजनीतिक संगठन बनाउन चाहेको उनको भनेका छ ।
मधेश आन्दोलनलाई उचाइसम्म पुर्‍याउन पार्टीलाई संस्थागत ढंगबाट अगाडि बढाउनुको विकल्प नरहेको उनले बताएका छन् । पछिल्लो समय संस्थागतभन्दा व्यक्तिगत ढंगबाट पार्टी सञ्चालन गर्न खोजिएको लालले आरोप लगाएका छ ।
‘विगतमा उम्मेदवारी र अवसरहरू किल्चिएका दृष्टान्तहरू पनि छन् । अब पार्टीलाई संस्थागत रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्ता पार्टीहरू आन्दोलनले बनेका छन् । कुनै व्यक्तिका कारण होइन । र, यसको हेक्का सबैले राख्नुपर्दछ। यो व्यक्तिको पार्टी होइन आन्दोलनकारीहरूको पार्टी हो ।’
वैकल्पिक पार्टीको नारा दिइएपनि एजेन्डलाई किनारा लगाइ सत्ता स्वार्थको वरिपरी घुम्न थालेपछि फुस्सा साबित भएको लालले बताए । ठाकुरले एजेन्डा उठाएपनि केही स्वार्थलोलुप्तका कारण परिणाम आउन नसकेको उनको भनाइ छ।
‘ठाकुरजीले एजेन्डा त उठाएकै हो । तर, हलो त गोरुले नै जोत्ने हो । बाँदर जस्तो चंखे, धुर्त र स्वार्थीहरूले कहिल्यै हलो जोत्न सक्दैनन्,’ उनी भने, ‘त्यसैले पार्टीलाई संस्थागत बनाएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन।’
उनले अध्यक्षमण्डलीय र बाँडफाँडको परिपाटी कायम रहेसम्म पार्टी अगाडि बढ्ने सम्भावना नरहेको जिकिर गरेका छन् ।
ठाकुरनिकट अर्का नेता डा. सिंह पनि पछिल्लो समय पार्टीभित्र भइरहेका गतिविधिप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। जसपाभित्र पछिल्लो समय उत्पन्न घटनाक्रममा नेताहरूले चालेको कदमप्रति आफ्नो असन्तुष्टि रहेको डा. सिंहले बताएका छन् ।
डा. सिंहले भने, ‘घटनाक्रमलाई उपेन्द्रजी, महन्थजी, बाबुरामजी वा राजेन्द्रजीले जसरी डिल गर्नुभएको छ त्यसमा मेरो असन्तुष्टि छन्’
फेरि डा. सिंहले भने, ‘कोरोनाकाबीच अहिले भइरहेको कार्यकर्ता भेला स्वास्थ्य सुरक्षाको दृष्टिकोणले उपयुक्त नरहेको उनको भनाइ छ। ‘नेताहरू कार्यकर्तामाझ जानु ठीकै हो। तर, अहिले कोभिडको जोखिम रहेको बेला कार्यकर्ताहरूको भीडभाड गर्नु उपयुक्त हो जस्तो मलाई लागेको छैन।’